विदेशी विश्वविद्यालयमार्फत सञ्चालित शिक्षण संस्था अनुगमन गर्न समिति, १५ दिनभित्र आउला त तिवेदन ? – Mission Khabar
विदेशी विश्वविद्यालयमार्फत सञ्चालित शिक्षण संस्था अनुगमन गर्न समिति, १५ दिनभित्र आउला त तिवेदन ?
मिसन खबर ७ पुष २०७८, बुधबार १८:००
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै समिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको बैठकबाट पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्दै मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।
समितिले उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ बमोजिम विदेशी शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ। शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका ८५ वटा शिक्षण संस्थाको सञ्चालन अनुमति नवीकरणको पाँच वर्षे अवधि २०७७ माघ मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ। नवीकरणका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरुले निवेदन पेश गरे पनि कोभिडलगायतका कारणले निरीक्षण तथा अनुगमन हुन सकेको थिएन् । ‘उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम सञ्चालन अनुमति पाएका विदेशी शिक्षण संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी ठोस रायसहित समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बु्झाउनुपर्नेछ ।
बैठकले त्यसको अध्ययन तथा निरीक्षणका लागि पाँच सदस्यीय विज्ञको समिति गठन गरेको छ। समितिको नाम भने मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ। यसअघि विदेशी विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित कलेजलाई अनुमति दिने एवंम नविकरण गर्ने समयमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको पाइएको छ । अबको अनुगमन व्यवहारिक हुन्छ वा नाम मात्रैको हुन्छ त्यो भने अगुमन र प्रतिवेदनले आफै खुलाउनेछ ।